Angel | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » Angel	5
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Oct 4, 2015 in Arts & Humanities |5comments
art Nge Zaw
Airbrush on Canvas ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: အိန်ဂျယ် ဝတုတ်လေးးး
ကျော်စွာခေါင် says: ကျနော့် အိန်ဂျယ်လ် လေးက မဘသ လို မသထာရေစာ စားသောက်ဘုန်းပေးတာမဟုတ်တော့ ကြည်ကြည်လင်လင် ဝဝတုတ်တုတ် ချစ်စရာလေး လေ… ဟေးဟေး ခုခွိ…
ဦးကြောင်ကြီး says: နန္ဒာခေါင်ကို အနော်ခြစ်သယ် ပါပါခေါင်… အဲလာ သူ့ကို နန္ဒာကြောင် ဖစ်ခွင့် ပေးလုိုက်ပါသော့…။
kai says: အ၀တ်တွေက.. ရှုပ်….
အကုန်ချွတ်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .သဂျီးပြောတာဦးသွားလို့….ကတောက်စ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.